FILA DE SÃO MIGUEL DOG MOMBA NY FIOMPIANA SY SARY - ALIKA
Fila de São Miguel Dog momba ny fiompiana sy sary
Sary natolotry ny Vale da Palha
Alika omby Azores
Ny Cão de Fila de São Miguel (Azores Cattle Dog) dia manana ny mampiavaka azy ny alika antonony, izay mampiavaka azy amin'ny alika omby hafa, satria amin'ny ankapobeny dia lehibe kokoa izany. Izy ireo dia biby loha loha, miaraka amin'ny valanoranom-pahefana matanjaka, maso mainty volontany mainty ary mahavalan-tratra amin'ny vatan-kazo sy rantsam-batana. Mandehandeha miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy ireo amin'ny famonosana somary somotraviavy ao amin'ny faritra anal sy ny fitombenany izy ireo. Ny lokon'izy ireo dia mandrakotra ny mavo mavo, misavoana ary ny volondavenona, misy koa ny lokony, na amin'ny maizina na amin'ny tony maivana dia mety misy patch fotsy ihany koa eo amin'ny faritra anoloana, saoka, tratra ary tongotra. Ny rambony dia tokony haorin'ny vertebra faha-2 na faha-3. Voakapa boribory matetika ny sofina.
Ny Cão de Fãila de São Miguel dia biby any an-toerana sy lehibe, afaka mijanona eny ivelany mandritra ny taona iray amin'ny fiambenana ny omby sy ny fitaovana ampiasaina amin'ny fambolena. Tena manan-tsaina sy mailaka mianatra, manatanteraka baiko isan-karazany. Toy ny alika ampiasaina amin'ny fitondrana omby ronono dia mazàna manaikitra ambany izy mba tsy handratra ny fihary mammary an'ireo omby, manaikitra bebe kokoa amin'ireo omby very. Izy io dia alika miasa alika tsara indrindra, fa koa alika mpiambina tsara ny alika fiarovana na alika mpiaro. Mety hanana toetra maranitra tena maranitra izy io, saingy mifanaraka amin'ny tompony. Tena manan-tsaina manana fahaizana lehibe hianarana. Ho an'ny tompona mety, ity alika ity dia manao amboa mpiambina tena tsara. Tena miaro ny faritaniny izy ireo. Tokony ho izy mifanerasera tsara , tsara kokoa raha tanora miaraka amin'ny alika sy olona, ​​indrindra amin'ny ankizy, satria mitandrina tsara ny olon-tsy fantatra ny karazany, na dia tena sariaka amin'ireo fantany aza izy. Mba hitahiry tsara an'i Cão de Fila de São Miguel dia tsy maintsy ataon'ny fianakaviana hahatratra ny toeran'ny mpitarika pack . Voajanahary voajanahary ho an'ny alika ny manana baiko ao anaty fonosany . Rehefa isika miaina miaraka amin'ny alika ny olombelona , lasa fonosin'izy ireo izahay. Ny iray manontolo miara-miasa ny fonosana eo ambany mpitondra tokana. Voafaritra tsara ny tsipika ary apetraka ny fitsipika. Satria alika dia mampita ny tsy fahafaliany amin'ny mimonomonona ary amin'ny farany manaikitra, ny olombelona hafa rehetra TSY MAINTSY avo kokoa amin'ny filaharana noho ny alika. Ny olombelona no tokony hanapa-kevitra fa tsy ny alika. Izay no fomba tokana ahafahan'ny fifandraisanao amin'ny alikao hahombiazana tanteraka.
Haavony: Lehilahy 19,5 - 24 santimetatra (50 - 61 cm) Vehivavy 19 - 23 santimetatra (48 - 58 cm)
Milanja: Lehilahy 55 - 90 pounds (25 - 41 kg) Vavy 45 - 80 pounds (21 - 36 kg)
Tsy mahalala olana ara-pahasalamana
Ny Cão de Fila de Sãao Miguel dia tokony hipetraka eo akaikin'ny tompony. Ity alika ity dia tsy mety amin'ny trano ipetrahana. Mila asa izany.
Mila manao fanazaran-tena isan'andro, izay misy a mandeha isan'andro, mandeha lavitra . Izy io dia tia mihazakazaka, milalao ary miasa.
Manodidina ny 15 taona
Palitao borosy imbetsaka isan-kerinandro
Tamin'ny 1427 dia hita ireo nosy Azorean. Rakotra zavamaniry maitso izy ireo izay sarotra idirana, saingy tsy nisy biby mampinono. Ireo tantsambo an'ny Printsy Henry dia nanipy omby tany amin'ny morontsirak'ireo nosy. Tamin'ny 1439 dia nisy andian'omby betsaka tany São Miguel. Nakarina afaka, dia lasa bibidia. Noho izany, tonga ny filan'ny alika omby, na alika fila. Ny alika manan-danja indrindra dia ny Filahatr'i Terceira (lany tamingana ankehitriny) izay avy eo nobeazina tamin'ny hafa mpametaveta hanao ny Cão de Fila de São Miguel. Ity alika ity dia nanjary singa tena ilaina amin'ny fiompiana omby, ankoatra ny fiambenana tsara ny fananan'ny tompony sy ny fianakaviany.
omby mastiff afangaro amin'ny laboratoara
FCI Group 1 - Diviziona - Alika omby misy fitsapana miasa
FSMA = Fikambanana Fila de São Miguel
Hijery ohatra hafa momba ny Fila de São Miguel Dog
Fila de São Miguel Sary 1
Fila de São Miguel Sary 2
Fila de São Miguel Sary 3
Sary Fila de São Miguel 4
mena baovao retriever volamena Mix
fifangaroan'ny dane sy poodle mahafinaritra
retriever volamena sy ny Chow Mix alika kely
anglisy bulldog sy basset hound
alika hosodoko afrika amidy